Samsung Galaxy A8s ကိုဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်တွင်မိတ်ဆက်လိမ့်မည် Androidsis ပါ
Huawei နဲ့ Samsung တို့ဟာလက်ရှိမှာတိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ် စျေးကွက် ဦး ဆောင်မှု တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှာကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုကြောင့်ဖုန်းတွေ၊ ဒါ့အပြင်လာမယ့်နှစ်မှာခေါက်နိုင်တဲ့ဖုန်းကိုပထမဆုံးမိတ်ဆက်တဲ့အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်လာမှာပါ။ သူတို့ဟာ in-display ကင်မရာပါတဲ့ကင်မရာဖုန်းကိုပထမဆုံးထုတ်ပြဖို့လည်းကြိုးစားနေပါတယ်။ Huawei မှာ Nova4ရှိတယ်၊ မိတ်ဆက်တဲ့ရက် အတည်ပြုထားပြီးသားပါ။ ဆန့်ကျင်တွင် ကိုရီးယားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ Galaxy A8s ရှိတယ်.
ဒီကိရိယာက Huawei ရဲ့ဖုန်းကိုမျက်နှာပြင်မှာပေါင်းစည်းထားတဲ့ဒီကင်မရာကစျေးကွက်ထဲမှာပထမဆုံးဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာကြည့်ရတာနဲ့တူနေတယ်။ ဒါပေမယ့်ဟုတ်တယ်e သည်ဤ Samsung Galaxy A8s ၏မိတ်ဆက်မည့်ရက်ကိုထုတ်ဖော်ပြီးဖြစ်သည်မရ။ ၎င်းသည် Huawei ဖုန်းမိတ်ဆက်ပွဲမတိုင်မီတွင်ကျင်းပလိမ့်မည်။
လွန်ခဲ့တဲ့နာရီအနည်းငယ်က Huawei Nova4ကိုဒီဇင်ဘာ ၁၇ မှာမိတ်ဆက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ ငါတို့အားလုံးသူတို့ကမျက်နှာပြင်မှာကင်မရာပါတဲ့စက်ကိုပထမဆုံးစတင်နိုင်တာကိုငါတို့လက်ခံတယ်။ ဒါပေမယ့်ကိုရီးယားလူမျိုးတွေဟာအတော်လေးထက်မြက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပုံရတယ်။ Samsung Galaxy A8s ကိုလာမယ့်ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့မှာရောက်ရှိလာမှာပါ.
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏ဖုန်းဖြစ်သည် LCD Infinity မျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်ပါလိမ့်မယ်BOE မှထုတ်လုပ်လိမ့်မည်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာငါတို့ဒီ Samsung ဖုန်းအသစ်ကိုတရားဝင်မြင်နိုင်လိမ့်မယ်။ ဤနည်းဖြင့်ရက်အနည်းငယ်ကြာကောလဟာလများပြီးနောက်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည် Huawei ကို ဦး ဆောင်သည်။
ဤ Galaxy A8s သည်တစ်ပါတည်းနှင့်ရောက်လာလိမ့်မည် မျက်နှာပြင် ၆.၃၉ လက်မနှင့် 6,39 MP ရှေ့ကင်မရာမရ။ ဖြစ်နိုင်ချေများစွာနှင့်အတူ selfies အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောကင်မရာတစ်လုံးသည်သံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ဒီသတ်မှတ်ချက်တွေတစ်ခုမှအတည်မပြုသေးပေမယ့် ငါတို့ကသူတို့ကိုကောလဟာလတွေအဖြစ်ထားခဲ့ရလိမ့်မယ်။
ကံကောင်းတာက ငါတို့ဒီ Galaxy A8s ကိုတွေ့ဖို့အထိသိပ်အကြာကြီးစောင့်စရာမလိုပါဘူး တရားဝင်။ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့မှစ၍ Samsung သည်ဤမိတ်ဆက်ပွဲကိုကျင်းပလိမ့်မည်။ ငါတို့ကအဲဒါကိုဘယ်လိုခြေရာခံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအချက်အလက်ရှိတဲ့အခါငါတို့ကမင်းကိုဝေမျှလိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Samsung Galaxy A8s တွင်တင်ဆက်မှုရက်စွဲရှိပြီးဖြစ်သည်
ဂူဂဲလ်မြေပုံများသည်ဂူဂဲလ် Assistant ကို၎င်း၏မွမ်းမံမှုတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်သည်
YouTube သည် Play Store တွင်ဘီလီယံ ၅၀၀၀ ကျော်ကျော်လွန်သွားသည်